Istudiyo seNest Poolside sabasebenzi kufutshane neGrafton Beach - I-Airbnb
Istudiyo seNest Poolside sabasebenzi kufutshane neGrafton Beach
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguGillian
Yithi zava kweli gumbi lihle lokulala elinye. Ilungele izibini kunye nabahambi abahamba bodwa.
IBayview Villa yabucala yaye intle kakhulu. Ipuli yayo esetyenziswa nangabanye abantu kunye nelanga labucala libekwe kwigadi entle. Ngenxa yokubuka ulwandle i-Mold Haven Bay, le ndlu ikufutshane ukusuka e-Grafton Beach nokuhamba imizuzu eyi-2 ukuya kweyi-3 ukusuka e-hamlet eyenzekayo ye-Pleasant Prospect kunye nemali yayo yokuma, i-mini-mart encinci kodwa enento yonke kunye nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa oziphekelayo ezifunekayo ukuze wenze iholide yamaphupha akho. Kukho imigangatho eyi-3 okanye amanqanaba, nganye ineflethi okanye indlu ekwicomplex ezimeleyo. 'I-The Crew' s Nest 'yiflethi okanye indlu ekwicomplex entle ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex enepuli.
Ithe ngcu kumqolo obukekayo, kude kufuphi nemifuno yePleasant Prospect, iBayview ijonge iCaribbean eblue kwaye inika iindwendwe umbono ongcono weFort Bennett, iFort endala engaphaya elunxwemeni, ebambe iintsalela zebhetri eyakhiwe yiBritish I-1778 ukukhusela iinqanawa zokulayisha iswekile kwi-bay evela e-US nakwabanye ababucala.